फिल्म सिटी निर्माणले गति लिँदै « Drishti News – Nepalese News Portal
७ कार्तिक २०७८, आइतबार 8:07 pm
काठमाडौं । सरकारले दोलखामा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको चलचित्र नगरी (फिल्म सिटी)लाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भएको छ ।
फिल्म सिटीको पछिल्लो अवस्था बुझ्न सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको एक टोलीले दोलखाको डाँङडुँगेडाँडास्थित निर्माण क्षेत्रको अवलोकन गरेको छ ।
शनिबार अवलोकनपछि सचिव अर्यालले प्राकृतिक सौन्दर्यता र इनडोर स्टुडियोको लागिसमेत यो स्थानमा फिल्म सिटी उपर्युक्त हुने देखिएको भन्दै सरकारले प्राथमिकता साथ काम अघि बढाउने जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले ५ वर्षअघि भीमेश्वर नगरपालिका–९ स्थित डाँङडुँगेडाँडामा चलचित्र नगरी बनाउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको चलचित्र विकास बोर्डलाई चलचित्र नगरी आयोजना निर्माण एवम् सञ्चालनका लागि निर्देशन दिएको थियो ।
सोही आधारमा एक हजार ५०० रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफल रहेको उक्त क्षेत्रमा फिल्म सिटी बनाउन बोर्डले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० समेत बनाइसकेको छ ।
सञ्चार सचिव डा. अर्यालले आयोजना स्थल अवलोकनपछि उच्च पहाडी स्थानमा रहेको दुर्लभ फिल्म सिटीमध्येमा यो ठाउँ भएकाले यसको महत्व अरू बढी हुने समेत बताए ।
यहाँबाट देखिने हिमालय शृङ्खला, अनेक थरी लालीगुँराससहितको फूल, चट्टान, खोलानाला र हरियालीले फिल्म सिटीलाई प्राकृतिक रुपमा समेत साथ दिने उनले बताए ।
फिल्म सिटीका अभियन्ता श्रेष्ठले राष्ट्रको गौरवको परियोजना भएकाले यसलाई कुनै हिसाबले रोक्न नहुने बताए । स्थानीयवासीको सहयोगमा जग्गा उपलब्ध गराउनेदेखि अन्य काममा समेत हातेमालो हुँदै आएकाले सरकारले ढिलो नगरी कामलाई तीव्रता दिन उहाँले मागसमेत गरे ।
उक्त परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसहितको व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारले केही रकम उपलब्ध गराए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा चलचित्र क्षेत्रको भविष्य जोडिएको यो काममा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।
प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र नगरीमा प्रशासनिक भवन तथा गेट निर्माणका लागि वाग्मती प्रदेश सरकारबाट भीमेश्वर नगरपालिकामार्फत तीन करोड ५० लाख रकम विनियोजन भई कामसमेत सुरु भइसकेको छ ।
डिपिआरमा केही थपघट गर्नुपर्ने भए त्यसलाई समेत हेरी बाँकी काम बढाउन वर्तमान सरकारले विशेष चासो दिने सचिव अर्यालले बताए ।
सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समेत यो परियोजनालाई तीव्र ढङ्गले अघि बढाउन निर्देशन दिए । त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न मन्त्रालय तयार भएको जानकारी आफूले पाएको अभियन्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनास्थलमा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ७६/२५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र सोही स्थानमा रहेका एक सय चारवटा रूखबिरुवा हटाउन स्वीकृति दिएको छ ।
डाँङ्डुगेडाँडामा फिल्म सिटी बनेमा यहाँ अहिलेसम्मको विश्वको सबैभन्दा बढी उचाइमा फिल्म सिटी बन्ने, आर्थिकरुपमा नेपाल सम्पन्न हुँदै जाने, सामाजिक तथा प्राविधिकरुपमा उपयुक्त ठाउँ रहेको र हावापानीको हिसाबले पनि अति उपयुक्त रहेको प्राविधिकहरुको मूल्याङ्कन छ ।
आयोजना निर्माणका लागि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटले मात्र नपुग्ने भएकाले विदेशी सहायताका लागिसमेत प्रयास भइरहेको जानकारी चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले दिए ।
इन्डोर र आउटडोर सुटिङका लागि धेरै जग्गा आवश्यक परे पनि मुख्य संरचना ९/६१ हेक्टरमा मात्र निर्माण हुने डिपिआरमा उल्लेख छ । फिल्म सिटी आसपासमा एयरपोर्ट, होटेल, रेलसहित बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
यो आयोजनालाई निवर्तमान सञ्चारमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतले २०७४ साल फागुन ३ गते शिलान्यास गरेका थिए ।